भन्सार विभाग भन्छ : १५१ देशसँग व्यापार, २३ मा मात्र नाफा | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर भन्सार विभाग भन्छ : १५१ देशसँग व्यापार, २३ मा मात्र नाफा
on: ३ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १८:३८ मुख्य खबर, समाचार
भन्सार विभाग भन्छ : १५१ देशसँग व्यापार, २३ मा मात्र नाफा
जेठ ३, काठमाडौं । नेपालले विश्वका १५१ ओटा मुलुकसँग द्विपक्षीय व्यापार गर्ने गरेको भए पनि २३ मुलुकसँगको व्यापारमा मात्र नाफा लिइरहेको पाइएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आवको नौ महीनाको विवरणमा १२८ मुलुकसँग व्यापार घाटामा रहेको छ ।
व्यापार नाफामा रहेका मुलुकको कारोवार भने असाध्यै न्यून छ । नाम मात्रैको व्यापार ती देशसँग भएको विवरणमा उल्लेख छ । छिमेकी देश चीन र भारतसँगको व्यापार घाटाको मात्रा सबैभन्दा बढी रहेको छ । भारतबाट रू.६ खर्ब ८६ अर्ब ८५ करोड ८० लाख २२ हजार बराबरको सामान आयात भएको छ । नेपालबाट रू. ४४ अर्ब १८ करोड ६२ लाख ८३ हजार बराबरको मात्रै निर्यात भएको छ ।
निर्यातभन्दा आयातको मात्रा बढी भएका कारण भारतसँग ठूलो परिमाणमा व्यापार घाटा भएको देखिन्छ । भन्सार विभागको विवरणका आधारमा हेर्ने हो भने भारतसँग रू. ६ खर्ब ४२ अर्ब ६७ करोड १७ लाख ३९ हजार बराबरको व्यापार घाटा रहेको छ । यस्तै उत्तरी छिमेकी देश चीनबाट रू. १ खर्ब ५३ अर्ब ९६ करोड ५६ लाख मूल्य बराबरको सामान आयात हुँदा रू. १ अर्ब ५२ करोड ३२ लाख ६१ हजार मूल्य बराबरका सामान मात्र निर्यात भएको छ । चीनसँग नेपालको व्यापार घाटा रू. १ खर्ब ५२ अर्ब ४४ करोड २३ लाख ४० हजार रहेको छ ।
नेपालको व्यापार घाटा हुने देशमा संयुक्त अरब इमिरेट्ससमेत रहेको छ । सो देशसँग रू. २६ अर्ब ७० करोड ४ लाख ६२ हजार बराबरको व्यापार घाटा छ । सो देशबाट रू.२६ अर्ब ८१ करोड ९१ लाख ९५ हजार बराबरको सामान आयात हुँदा रू. ११ करोड ८७ लाख ३३ हजार बराबरको मात्रै निकासी भएको छ । नेपालको व्यापार घाटा रहेको देशमा फ्रान्ससमेत रहेको छ । फ्रान्ससँग रू. १६ अर्ब ४० करोड ११ लाख ४७ हजार बराबरको व्यापार घाटा रहेको छ । फ्रान्सबाट रू. १७ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ७४ हजार बराबरको सामान आयात गर्दा रू. ९६ करोड ६८ लाख बराबरको मात्रै सामान निकासी भएको छ ।
इण्डोनेसिया, थाइल्याण्ड, क्यानाडा, मलेसिया, स्विटजरल्याण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जे्न्टिना, भियतनाम, साउदी अरब, युक्रेनलगायतका देशसँग पनि नेपालको व्यापार घाटा रहेको विभागको विवरणमा उल्लेख छ । नेपालको कूल व्यापार हुने मुलुकमध्ये बहामासमा रू.८ लाख ६९ हजार, यमन रू. १ करोड ८२ लाख ८७ हजार, अल्जेरिया रू. ६ करोड ८६ लाख ४७ हजार, एन्टिगुआ र बर्मुडा रू. २ लाख ७८ हजार, न्यू क्यालेडोनिया रू. १ करोड ६६ लाख ६१ हजार, गुयना रू. २८ लाख ५१ हजार, अजरबैजान रू. १८ लाख ८४ हजार र पानामा रू. २३ लाख १६ हजार बराबरको सामान निर्यात भई नाफामा रहेको पाइएको छ ।
चालू आवको नौ महीनामा रु १० खर्ब ६१ अर्ब ६१ करोड १२ लाख चार हजार बराबरको आयात भएको छ । यस्तै सोही अवधिमा रु ६९ अर्ब ८२ करोड २३ लाख ४८ हजार बराबरको मात्रै सामान निर्यात भएको छ । व्यापार घाटा मात्रै रू. ९ खर्ब ९१ अर्ब ७८ करोड ८८ लाख ५७ हजार बराबरको रहेको छ । विभागका अनुसार कूल ४६ मुलुकमा भने कुनै पनि मालवस्तु निर्यात हुन सकेका छैनन् ।
सार्क मुलुकमध्ये पाकिस्तानसँग पनि रू. ४५ करोड १४ लाख ४६ हजार बराबरको व्यापार घाटा छ भने भूटानसँग रू. १ अर्ब ५ करोड ६० लाख ५५ हजार बराबरको घाटा रहेको छ । श्रीलंकासँग रू. २१ करोड ७२ लाख ६८ हजार व्यापार घाटा रहँदा अफगानिस्तानसँग भने रू. १ करोड ४७ लाख ८४ हजार बराबरको नाफामा रहेको छ । यस्तै बंगलादेशसँग रू. २ अर्ब ४६ करोड सात लाख ५८ हजार बराबरको व्यापार घाटा छ । रासस
१० माघ २०७५, बिहीबार ०६:५१